Benze kanjani abafundi kule nkampani ezivivinyweni zikahulumeni jikelele?
Ngabe basebenza kanjani abafundi kule nkampani uma kuqhathaniswa nemikhawulo yesikhashana yombuso yokufunda isiNgisi / Ulimi lwezobuciko kanye neMathematics?
Imaphi amazinga wobuchwepheshe abafundi bale nhlangano abawakhombisayo?
Athini amazinga okubamba iqhaza kule nhlangano ezihlolweni zikahulumeni jikelele?
Bheka Umbiko Wonyaka Wokusebenza (APR). https://media.doe.in.gov/apr/2019/f2400-standard.pdf